KuZoo naambuya nasekuru, mahara kwenguva shoma | IPhone nhau
KuZoo naambuya nasekuru, mahara kwenguva yakati rebei
Kunongova nemazuva gumi chete kusvikira chidiki cheimba chitange zororo reKisimusi, nguva yatichazofanira kuvaraidza vana vedu munzira ipi neipi kuyedza kuvadzivirira kubva pakuva vanofinhwa nezvazvinosanganisira. Iko kunyorera kwatinokuratidza nhasi Ku zoo nambuya nasekuru, kuchabvumidza vana vedu kuwana nguva inonakidza pavanenge vachidzidza kugadzirisa mapuzzle, kufudza mhuka, kuchera zvinhu ... Fairlady Media, inotipa mitambo dzakasiyana kune vadiki mune ivo sekuru nasekuru ndivo protagonists, mitambo yakakodzera kune vadiki vari mumba vari pakati pemakore maviri kusvika masere ekuberekwa.
Ku zoo naambuya nasekuru, iko kunyorera kuti Iri muChirungu, asi nekuda kwekuita kwayo kwakanaka, chero mwana anogona kutamba pamwe nekudzidza mumwe mutauro pasina matambudziko. Dingindira remutambo uyu rinotarisa kumhuka, mhuka dzesango, nzvimbo dzavanogara, maitiro avo, chikafu chakakodzera, hurukuro yavo ... asi zvakare ichabvumidza vana kuvandudza kuverenga kwavo, kuita masvomhu, sainzi uye zvimwe zvidzidzo zvepuraimari.
Mabasa anowanikwa kuZoo naambuya nasekuru
Mheremhere. Izvo zvidiki zvichafanirwa kuziva iwo marira emhuka nemufananidzo wavo.
Masvomhu: kuverenga kushanya
Fananidza zviratidzo nemhuka. Yakanakira ivo kuti vadzidze mazita echiChirungu emhuka.
Balance iyo chisimbiso bhora kune rakakura show!
Tora toyi nyowani!
En Ku zoo naabula nasekuru, vana vedu vanozoongorora kwavo kuperetera uye kugona kuverenga, kugona kugadzirisa mapuzzle, ita kuwedzera, kuyedza kugona kwavo pamwe nekudzidza hunhu hwakanaka pamusoro pekuchengetedza zvisikwa. Uyu mutambo Iyo ine mutengo wenguva dzose we2,99 euros muApp Store, asi kwenguva yakati rebei tinogona kuikanda mahara.
Mu zoo3,49 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » KuZoo naambuya nasekuru, mahara kwenguva yakati rebei
Mahara kana akaderedzwa maapplication nemitambo kwenguva yakaganhurirwa